Mosh nke Sugar Plums | Martech Zone
Mosh nke Sugar Plums
Monday, October 9, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Ana m eme ezumike dị mkpa n'abalị a. Ana m arụ ọrụ ruo ọtụtụ izu, ọ na-ejide m.
Achọghị m ịde mmelite na blọọgụ m, enwere ihe m mụtara kwa ụbọchị ọ masịrị m ịkekọrịta. Edeela m echiche m na Youtube ire ere, ọ dị ka nke ahụ mezuru!
Ekwesịrị m ịsị na ọ na-ehichapụ ka m hụ ihe karịrị ọkara nke faili ntanetịime m nwere ozi ire ere taa. Ọ dị mkpa nke ahụ n’ezie? O doro anya na ego zuru oke ... mana gịnị kpatara oohs na aahs?
Ka o sina dị, nwa m nwoke nwere obi ụtọ na Dance of Sugar Plums ma achọrọ m ịkọrọ gị ya! N'ezie, o deghi ihe a… mana o mere nke ya, na-egwu egwu nke ọ bụla ma na-agwakọta ya n'onwe ya. Kporie!
Gaa na nke Bill saịtị na-ege ntị ya ọzọ 'ochie'!
Iche iche gị nri na Images
Crash… mba foo-foo biko.
Ọkt 9, 2006 na 8:55 PM
Ị bụ dike m, nna!
Ọkt 10, 2006 na 5:39 PM
M na-adịghị ekwu okwu banyere gị blog… ọ bụ eleghị anya, 100 nke 160 nke faili ntanetịime na m na-agụ nwere Google News. Ọ dị njọ na mmadụ enweghị ike iwulite 'deduplicator' maka ndị na-agụ akụkọ dabere na Bekee!
A na m atụ anya ka ị, na njikọ gị na Google. Ọ bụ saịtị teknụzụ niile biputere ya na-eme m obi ụtọ!